माक्र्सवाद र एशियाली दर्शन सबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन उत्साहकासाथ सम्पन्न अर्को वर्षपनि आयोजना गरिने
जय कार्की प्रकाशित मिति : बुध, भदौ ४, २०७६
समापन समारोहको तस्बिरहरु फोटो अमित योन्जन तामाङ
भदौ २ गतेबाट शुरुभएको माक्र्सवाद र एशियाली दर्शन सबन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अत्यन्त सफलताका साथ सम्पन्न भएको छ । झण्डै दुई दर्जन भन्दा बढि कार्यपत्र प्रस्तुत भएको सम्मेलनमा नेपाल, भारत र चीनका विद्धान तथा दर्शनशास्त्रीहरुले विभिन्न विधामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यो भव्य समारोहको पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले उदघाटन गर्नु भएको थियो भने शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, बौद्ध विश्व विश्वविद्यालयका उपकुलपति, खुल्ला विश्व विद्यालयका उपकुलपति, भारतीय दर्शनका ज्ञाता अशोक मोदक, चिनीया दर्शनशास्त्री प्रोफेसर लिउ झिउ तिङ लगायतले दर्शन सम्बन्धी यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको खुलेर प्रशंसा गर्दै विचारहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
उदघाटन शत्र सकिनासाथ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको दुईवटा ठूला हलहरुमा दर्शनको विभिन्न पाटाहरुको विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए । त्यसैगरी भोलीपल्ट भाद्र ३ गतेका दिन विहानैदेखि सुचारु गरिएको गोष्ठिमा उपस्थित हुनेहरुको भिड देखेर आयोजकमात्र होईन विश्लेषकहरु पनि चकित परेका थिए । उनीहरुलाई सिट प्लानिङ गर्न धौ धौ परिरहेको थियो ।
दर्शन शास्त्रको विषयमा यति ठूलो अभिरुचि र जिज्ञासा राखेको मैले अन्त कतै देखेको छैन भन्दै समापन मन्तव्यमा भारतीय दर्शनशास्त्री अशोक मोदकले खुशी व्यक्त गरे भने प्रोफेसर लिउले अब विश्वको सबै क्षेत्रमा एक नम्बर हुनेपालो एशियाकै हो । हामीले एउटा राष्ट्रको मात्र चर्चा गर्ने होइन सिंगो एशियालाई उठाउने, ब्युँझाउने र सम्पन्न बनाउने बाटोमा अघि बढनुपर्छ । अव अरु विकशित देशको दर्शन र विचारले हुँदैन । उनीहरुले एशियालाई उनिहरुको भाषा, धर्म र संस्कृति लादेर उनिहरुको अधिनमा राखेका छन । उनीहरुको उपनिवेशको त अन्त्य भयो तर उनीहरुले उपनिवशेवादी विरासत लादेर गएकोले एशियालीहरु मुक्त हुनसकेका छैनन । हामी एशियाली उनिहरुभन्दा अब्बल छौं, हाम्रो धर्म संस्कृति, दर्शन सबै उनिहरुको भन्दा अब्बल छ भनेर हामी आपैmले पत्याउन सकिरहेका छैनौ भन्ने उनको विचार थियो ।
उनी भन्छन एशियामा सबैभन्दा अग्लो हिमाल छ, एशिया पनि त्यति नै ठुलो छ ज्ञान र बुद्धिमा पनि एशियाली नै ठूला छन र दर्शन पनि हाम्रै विशाल छ, सभ्यता पनि सबैभन्दा पुरानो हाम्रै छ ।
साहित्य, कला, अर्थ लगायत अनेकौ विषयमा भएको यो विशाल गोष्ठिमा सबै तहका सहभागीहरुको उपस्थिति रहेको थियो भने सहभागीहरुले मनमा उठेका जिज्ञासाहरुलाई राख्ने मौका पनि राम्रै पाएका थिए ।
भारतीय दर्शन शास्त्री अशोक मोदकले विवेकानन्दको तर्कलाई बढिमात्रामा जोड दिनु भएको थियो भने गान्धी लगायतको प्रत्ययवादी दर्शनको सकारात्मक पक्षका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तोताहरुलाई कार्यक्रममा मायाको चिनो र प्रशंसापत्र गुरुकूलका अध्यक्ष स्वनाम साथी र हिमाली दर्शनका लेखक चैतन्यले संयुुक्तरुपमा प्रदान गर्नुभएको थियो । स्वनाम साथीले यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हरेक बर्ष आयोजना गर्ने घोषणा गर्दै एशियाली दर्शन र माक्र्सवादी दर्शनका वीचमा तादात्म्यता खोजि गर्दै एशियाली दर्शनलाई अझ विकास गर्दै एशियाली जनताका विचमा पु¥याउने अठोट गर्नुभयो ।
२० वटा आयोजक संस्थाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रमलाई सबैले अत्यन्तै उपयोगी कार्यक्रम भनि प्रशंसामात्र गरेका छैनन । माक्र्सवादी दर्शनको महत्वका विषयमा थप प्रष्ट हुने मौका पाएकोले आगामी दिनमा यसको सकारात्मक प्रभाव धेरैवटा क्षेत्रहरुमा पर्ने विश्लेषण पनि गर्न थालेका छन ।
अन्तमा हिमाली दर्शनका लेखक तथा दर्शन शास्त्री चैतन्यले नेपालभित्र बसेर, तपश्या गरेर, अनुसन्धान गरेर बालमिकी रामायण, महाभारत, बुद्ध दर्शन लगायत कैयौं कृतिहरु ऋषिमुनीहरुले लेखेका छन । तर ती सबै भारतीय दर्शनभित्र समावेश भएका छन ।
नेपालमा बसेर, अनुसन्धान गरेर लेखेका ती दर्शनहरु नेपालको सम्पति भएकोले त्यसको स्वामित्वका लागि हिमाली दर्शन नामाकारण गरिएको हो भारत र नेपालको दर्शन छुटयाउन सहज छैन । हाम्रो दर्शन वास्तवमा हिमाली दर्शन नै हो र पूर्वीय दर्शन भन्नाले एशियाको दर्शन भन्ने नै बुझिन्छ तर त्यसलाई सिंगो एशियाको दर्शन बनाउनुपर्छ त्यसका लागि मध्येपूर्व, टर्कीदेखि जापान, रुसभित्र पर्ने एशियाली देशहरु श्रीलंका, बंगलादेश, भुटान, मलेसिया, बर्मा लगायत सबैको सम्पूर्ण दर्शनलाई एशियाली दर्शन नै भन्नुपर्छ भन्दै तर्क प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यो भव्य अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको अर्को पक्ष हो व्यवस्थापनको पक्ष । यो निकै सबल र अनुसासित देखिएको छ । २० वटा आयोजक रहेको यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नु चानचुने कुरा थिएन । तर, भव्यतापूर्वक सबैलाई गदगद पारेर सफल पार्नु यो आफैमा निकै महत्वपूर्ण विषय हो । कार्यक्रमको समापन पश्चात नेवारी संस्कृतिमा आधारित खाजासहित कार्यक्रमको छोटो मूल्याँकन पनि गरिएको थियो ।
1. यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले पूर्वी दर्शनलाई बृहत बनाउँदै एशियाली दर्शन तर्फ तानेको छ ।
2. यसले एशियालीहरुका वीचको सम्वन्धलाई अझ गाढा र निकटता प्रदान गर्ने निश्चित छ ।
3. उपनिवेशवादी विरासतको अन्त्य गर्दै एशियाली हामी अरुभन्दा अब्बल सोच राख्दछौं । हाम्रो दर्शन सबैभन्दा पुरानो र महत्वपूर्ण छ ।
4. अब एशियाली दर्शन र विचारले नै विश्वभरी प्रभाव पार्नुपर्दछ र माक्र्सवादी दर्शन र चिन्तनलाई यसैभित्र तुलना गर्नुपर्दछ ।
5. एशियाभन्दा बाहेकका जनउपयोगी दर्शनलाई ग्रहण गर्नुपर्दछ ।
6. भारतीय दर्शनसित नेपालको दर्शन गाभिएको छ । त्यसलाई छुटयाएर हेर्नुपर्छ र पहिचानका लागि हिमाली दर्शन भनि नामाकरण गर्नुपर्दछ ।
7. माक्र्सवादी दर्शनलाई अनेकौं ढंगले आफुखुशी तोडमरोड गर्न दिनु हुँदैन ।
8. दर्शनको सही सदुपयोग विना देशको राजनीतिलाई सही दिशामा डोहो¥याउन सकिन्न भन्ने निष्कर्ष सहभागीको नाताले कम्युनिष्ट अनलाईनको निष्कर्ष रहेको छ ।
सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका महत्वपूर्ण कार्यपत्रहरु हामीलाई प्राप्त हुनासाथ क्रमश प्रकाशन गर्दै जानेछौं ।
Email: communistonlinenep[email protected]